Mojito လုပ်နည်း - ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Mojito သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးကော့တေးတစ်မျိုးဖြစ်သော်လည်းအများဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အောင်မြင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်ပြင်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အသုံးအဆောင်များကိုများသောအားဖြင့်အိမ်အများစုတွင်တွေ့ရသည်။ ပြီးတော့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်နှိုက်ကတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်၊ ပြီးတော့ခင်ဗျားကဒါကိုနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်ရုံနဲ့လုံးလုံးကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့်အရေးအပါဆုံးကတော့ဒါဟာအရသာရှိတဲ့ကော့တေးတစ်ခုပါ။ Mojito သည်သူငယ်ချင်းများစုဝေးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ပါတီပွဲများနှင့်အများအားဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိုရည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အားလပ်ချိန်ကိုမွေ့လျော်လိုကြသည်။
၎င်း၏လန်းဆန်းစေသောအရည်အသွေးများသည်ပူပြင်းသည့်လများအတွင်းမဟာမိတ်ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အစာခြေခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်ပေးသောအကျိုးကျေးဇူးများအတွက်လည်းထင်ရှားသည်။ သင်တစ် ဦး ကျူးဘား mojito ရရန်သင်လိုအပ်သောအဘယ်အရာပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားရန်သင့်ခြေရာခံရန်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုထွက်ရှာပါ။ သင့်ကိုသူကိုယ်တိုင်ထိတွေ့နိုင်အောင်ကူညီပေးမယ့်မှတ်စုများနှင့်လှည့်ကွက်အချို့ပါရှိပါတယ်။ တစ်ခုခု, အဆုံးစွန်သော, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအားလုံးပေါင်းစပ်ဆက်စပ်, ဤသည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။
1 Mojito ပါဝင်ပစ္စည်းများ
2 Mojito ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
3 မှတ်စုများ၊ ကွဲလွဲမှုများနှင့်လှည့်ကွက်များ
3.2 Peppermint ဒါမှမဟုတ် Mint?
45 ml ဖြူရမ်
တောက်ပသောရေ 90 ml
ပါးစပ်ကျယ်။ ကောင်းသောစွမ်းရည်ရှိသောဖန်ခွက်ထဲ၌လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၂) ခုထည့်ပါ။ (မြည်းစမ်းကြည့်လျှင်ခါးသီးလွန်းလျှင်ထပ်ထည့်နိုင်သည်)၊ ၇-၈ မိနစ်အရွက်များနှင့်ထုံးတစ်ဝက်တို့ကိုလေးပိုင်းခွဲပါ။ ) ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအင်္ဂတေနှင့်ပြားချပ်ချပ်ဖြင့်ညင်ညင်သာသာနှိပ်စက်ပါ။ ၁၀ ကြိမ်ထက်မပိုသော ၎င်းသည်၎င်းတို့အားပယ်ဖျက်ရန်မဟုတ်ပါ။ မတူညီသောရနံ့နှင့်အရသာအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ရေခဲထပ်ထည့်ပါ။ ၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်းတင်ဆက်မှုကိုပိုမိုဆွဲဆောင်ရန်ဖန်သားစွန်းမှအနည်းငယ်ထွက်လာသည်ကိုစဉ်းစားပါ။ ထို့အပြင်ပူစီနံနှင့်နှင်းခဲတစ်ချောင်းဖြင့်အလှဆင်ပါ (ဖန်ခွက်၏အစွန်းတွင်ရှိနေစေရန်အလျားလိုက်အပေါက်ပါစေ) ။
ယခုကောက်ရိုးတစ်ချောင်းကိုယူပြီးလျှင်သင်၏ mojito ကိုပျော်မွေ့ပါစေ။
မင်း Mojito ကိုကြိုက်လား။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်ရမ်၏ပမာဏကိုသိုလှောင်ထားကာအစိုဓာတ်ပါသောရေပမာဏကိုလျှော့ချပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရိုးရှင်းစွာမြှင့်တင်ပေးတဲ့ရမ်ကိုမြှင့်တင်ပေးပါ၊ ဒါပေမယ့်သေချာစွာသင်ရောမွှေပါစေ။
Mojito ၏အရက်သည်အသုံးပြုသောရမ်အမျိုးအစားနှင့်ပမာဏပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ တောက်ပသောရေနှင့်ထုံးဖျော်ရည်ပမာဏသည်ဤပေါင်းစပ်မှု၏နောက်ဆုံးအရက်ကိုပါလွှမ်းမိုးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရမ်ကိုအရက်ရာခိုင်နှုန်း ၄၀% ဖြင့်ရမ်ကိုအသုံးပြုပါကအထက်ပါစာရွက်တွင်ပမာဏသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၄º ဒီဂရီရှိသော mojito ကိုရရှိလိမ့်မည်။
Peppermint ဒါမှမဟုတ် Mint?
မွှေးကြိုင်သောအပင်များနှင့် ပတ်သက်၍ သငျသညျ peppermint မရှိပါကလတ်ဆတ်သောပူစီနံကိုအသုံးပြုနိုင်သည် (သို့မဟုတ်သင်ဒုတိယထက်ပထမ ဦး ဆုံးအပင်၏အရသာကြိုက်လျှင်) ။ နှစ် ဦး စလုံး mojito များအတွက်perfectlyုံတရားဝင်ဖြစ်ကြသည်။
ဤအဆင့်တွင်အရေးကြီးသည်မှာ Mojito ပြင်ဆင်နေစဉ် spearmint / mint အရွက်များမကွဲပါစေနှင့်။ ရည်မှန်းချက်မှာသေးငယ်သောအပိုင်းအစများသည်သင်သောက်သောအခါသင်၏ပါးစပ်ထဲသို့မရောက်စေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အလှဆင်မှုများ (spearmint / mint နှင့် lime) နှင့်ကောက်ရိုးများကိုဖန်ခွက်၏တည့်တည့်တွင်ထားရန်စဉ်းစားပါ။ ၎င်းသည်မရှိမဖြစ်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုအတွေ့အကြုံပိုမိုပြည့်စုံစေရန်အထောက်အကူပြုသည်ဟုမှတ်ယူသည်။
mojito ချက်ပြုတ်နည်းများစွာရှိသည်ဟုပြောခြင်းသည်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းကိုပြင်ဆင်သူများလည်းရှိသည်။ သို့သော်၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်သေးငယ်သောအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ကူးထားခြင်းသည်အသုံးဝင်သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာသကြားပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အချို့လူများကချိုသောရလဒ်ကိုလိုချင်ကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်သကြားထပ်ထည့်ရန်ပြproblemနာမရှိပါ။ နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာအပင်များမှရေကိုအစားထိုး soda (သို့) Sprite ကဲ့သို့သောအချိုရည်များကိုအစားထိုးရန်ဖြစ်သည်.
မူလ mojito မှာကြေမွနေသောရေခဲအစားရေခဲ Cube များရှိသည်။ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်ပူနွေးသောနေရာများတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်တစ်ခုမှာ Cube များသည်ပိုမိုနှေးကွေးစွာအရည်ပျော်သွားသည်။ သင်ကြိတ်ထားသောရေခဲကိုပိုနှစ်သက်ပါက၎င်းကိုကြိတ်ခွဲပြီး ၀ ယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လက်ဖက်ရည်သုတ်ပဝါတွင်ရေခဲတုံးအနည်းငယ်ကိုထုပ်ပြီးမာကျောသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အသာပုတ်ပါ။ စကားမစပ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုအချို့ကိုသက်သာအောင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဝက်ထုံးတပြင်လုံးကိုထည့်သွင်းသို့မဟုတ်ညှစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံး option ကိုသတိပြုသင့်ပါတယ် အသားအရေကြောင့်အရသာနှင့်အနံ့များကိုပိုမိုရရှိစေသည်။ ငရုတ်သီးသို့မဟုတ်ပူစီနံကိုဖန်ထဲသို့ထည့်ခြင်းမပြုမီလက်ဖဝါးနှင့်ထိတွေ့သောအခါအလားတူဖြစ်ပျက်သည်။